Tidal magetsi chiteshi: maitiro, mashandisiro uye zvakanakira | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Simba remvura yegungwa
Munyika yesimba remagetsi kune mamwe anozivikanwa zviri nani sesimba rezuva uye simba remhepo uye mamwe asinganyanyi kuzivikanwa akadai setidal energy. Imhando yesimba rinodzokororwa rinotora mukana wemafungu egungwa. Kuti uite izvi, unoda a tidal power station uko ndiko kushandurwa kwekinetic simba remagetsi emagetsi emagetsi kunoitika.
Muchikamu chino tichakuudza zvese zvaunoda kuziva nezve tidal power station, maitiro ayo uye basa rayo.
1 Tidal simba
2.1 Tidal current generator
2.2 Madhamu emvura
2.3 Dynamic tidal simba
3 Kubatsira uye kusagadzikana
4 Kushanda kwetidal power plant
Gungwa rine simba guru, rinogona kuchinjwa kuva magetsi kuburikidza nemhando dzakasiyana-siyana. Pakati pezviwanikwa zvesimba remugungwa sekutsanangurwa kwazvinoitwa neInstitute for Energy Diversification uye Saving (IDAE), tinowana mhando dzakasiyana:
Simba rinobva mumakungwa: Inosanganisira kushandisa kinetic simba remvura yemugungwa kugadzira magetsi.
Wave energy kana wave energy: Iko kushandiswa kwemagetsi emagetsi emafungu.
Tidal thermal: Zvinobva pakutora mukana wekusiyana kwetembiricha pakati pemvura yepamusoro nepasi pegungwa. Iyi shanduko yekupisa inoshandiswa pamagetsi.
Tidal energy kana tidal energy: Inobva pakushandiswa kwemafungu, kupera uye kuyerera kwemvura yegungwa, inogadzirwa nesimba rinokwevera rezuva nemwedzi. Saka, simba ringangove remafungu rinoshandurwa kuita simba remagetsi kuburikidza nekufamba kweturbine, sezviri mumagetsi emagetsi emagetsi.
Tidal energy ndiyo imwe simba sosi yakavakirwa pakubatanidza kunyura nekuyerera kwemvura yemugungwa, iyo inogadzirwa nekukweva kwezuva nemwedzi. Nenzira iyi, chinhu chinofanogoneka chinoitika chinotibvumira kufanoona apo mafambiro emvura aya achakwanisa kushandurwa kuita magetsi.
Iyo tidal power station ndiyo inowanikwa muchina wakakodzera kushandura kinetic simba remafungu kuita simba remagetsi. Pane nzira dzakawanda dzekuwana simba remvura. Isu tichaona imwe neimwe yadzo uye maitiro avo makuru:
Iyo inozivikanwawo seTSG (Tidal Stream Generators), aya majenareta anoshandisa mafambiro emvura kushandura kinetic simba kuita magetsi. Iyi ndiyo nzira inonyanya kuzivikanwa. Iyi nzira yekuwana simba zvinosanganisira kudhura kwakaderera uye kuderera kwezvakatipoteredza zvichienzaniswa nedzimwe nzira.
Madhamu aya anotora mukana wesimba remvura ringave riripo pakati pekusaenzana pakati pemvura zhinji uye kuderera kwemvura. Izvo zvipingamupinyi zvine turbines, dzakanyanya kufanana nemadhamu echinyakare, akavakwa pamusuwo webay kana dhamu. Mutengo wacho wakakwira uye purofiti haina kukwira. Kushomeka kwenzvimbo munyika dzinosangana nemamiriro ekudzigamuchira uye kukanganisa kwezvakatipoteredza zvipingaidzo zviviri zvikuru.
Dynamic tidal simba
Tekinoroji iri muchikamu chedzidziso. Iyo inozivikanwawo seDTP (Dynamic Tidal Power), inosanganisa maviri ekutanga, ichishandisa kudyidzana pakati pesimba rekinetic uye simba mukuyerera kwemvura. Iyi nzira ine hurongwa hwemadhamu mahombe anounza mafambiro akasiyana emvura mumvura kuti aunganidze maturbine ayo ekugadzira magetsi.
Isu tinosimbisa kuti iyi imwe simba ine zvimwe zvakanakira:
Isimba rakachena iro risingaburitse magasi egreenhouse kana zvimwe zvinosvibisa kubva kune mamwe marudzi emagetsi masosi.
Hapana mamwe mafuta anoshandiswa.
Kuenderera uye kwakavimbika simba rekugadzira.
Mafungu haaperi uye ari nyore kufanotaura.
Icho chitubu chesimba rinodzorerwa.
Pasinei nekukwanisa kukuru, kushandiswa kwesimba remvura kunewo zvakaipira, kusanganisira:
Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekudyara kwakakura kwemari. Zvinodhura kuisa.
Iyo ine hukuru hwekuona uye mamiriro ekunze pamahombekombe, ichiva chimwe chezvinhu zvinoshungurudza zvakanyanya zvesimba remvura.
Tidal simba haisi iyo yakanakisa sarudzo kune ese geographic nzvimbo. Nekuti kuwanda kwesimba ratinogona kuwana kunoenderana nekufamba kwegungwa uye simba remafungu.
Tidal energy Yakashandiswa kugadzira magetsi kubva kuma1960. Nyika yemapiyona iFrance, ine gwenya remagetsi muLens richiri kushanda.
Nyika dzine simba rekugadzira magetsi pari zvino i: South Korea, ichiteverwa neFrance, Canada, United Kingdom neNorway. Parizvino, simba remafungu rinomiririra chikamu chidiki chesimba repasi rose rinogonekazve, asi mukana wacho wakakura.
Kushanda kwetidal power plant
Tidal power plant inzvimbo iyo simba rinogadzirwa nemafungu egungwa rinoshandurwa kuita magetsi. Kutora mukana nazvo, madhamu ane turbines anovakwa muchikamu chezasi, kazhinji pamuromo werwizi kana bay. Dziva rakagadzirwa nekuvakwa kwedhamu rinozadza uye rinodurura nekufamba kwega kwega kwemvura uye nzira yemvura yainoburitsa, zvichibvumira kutanga kwema turbines anogadzira magetsi.
Zvigadzirwa zvemagetsi zvinoshandura sei simba remvura kuita magetsi? Kuti upindure mubvunzo uyu, zvinodikanwa kufunga nezvemisimboti yekugona uye kinetic simba reyakajairika kuwedzera uye kuderera mukati masaisai anogadzirwa nekudyidzana kweZuva neMwedzi. Kusimuka kwemvura kunonzi kuyerera, uye nguva yekudzika ipfupi pane yapfuura.
Musiyano wekukwirira pakati pemvura yegungwa uye mwero wedhamu wakakosha, saka, maererano neInstitute for the Diversification and Conservation of Energies (IDAE), inongobatsira munzvimbo dzemahombekombe uko kureba kwemafungu emvura uye pasi. inosiyana neanopfuura 5 metres akatarisana nekuiswa kweaya maitiro. Aya mamiriro anogona kusangana chete munzvimbo shoma dzenzvimbo paPasi. Mumafekitari, magetsi anoshandurwa nema turbines kana alternators. Nekutenderera kwemashizha ayo uye nekutenderera kwemvura pachayo, simba remagetsi rinogadzirwa.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve tidal power station uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba remvura yegungwa » Tidal power station